Fanafody any Thailand ~ Journey-Assist - Hopitaly sy toeram-pitsaboana any Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Fanafody any Thailandy
Endrika fanafody any Thailand
Jeneraly amin'ny toeram-pitsaboana any Thailand
Fitsaboana ny olona (tempoly)
Ny toeram-pitsaboana tsy miankina tsara indrindra any Thailand
Vondron'ny hopitaly ao Bangkok
Samitalj Hospital Bangkok
Ny tombontsoa amin'ny fitsaboana any Thailand
Tsikaritry ny mpizahatany
Inona no atao raha marary (tsy fiantohana)
Inona no atao raha marary (insurance IS)
Adiresin'ireo hopitalim-panjakana any amin'ireo tanàna lehibe any Thailand
Fanafody any Phuket
Fanafody fitsaboana any Thailand
Ao Thailand, misy ny fomba fitsaboana amerikanina izay miantehitra amin'ny regimens fitsaboana mafy orina, izay manamaivana ny fiantraikan'ny vokatr'olombelona amin'ny fitsaboana. Izy io dia tombony (satria kely kokoa ny fotoana azon'ny dokotera hamitahana ny marary na noho ny fahadisoana), ary ny fatiantoka (satria tsy voahaja ny fanao manokana).
Fa amin'ny ankapobeny, ny fanafody any Thailand dia azo antsoina hoe kalitao avo indrindra. Eto ianao dia afaka manavaka karazana fikarakarana ara-pitsaboana 3: klinika ara-barotra, fanjakana ary fanafody nentim-paharazana.
Thailand dia iray amin'ireo mpitondra eran'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny fizahantany ara-pitsaboana. Izany dia nanamora ny:
Kely ambany ny vidiny.
Fanafody avo lenta, tsy ambany noho ny kalitaon'ny serivisy any amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina any Etazonia sy Eoropa Andrefana.
Ny mety hanambatra ny fitsaboana amin'ny fialan-tsasatra kalitao sy ny fialamboly isan-karazany.
Toeram-pitsaboana ao Thailand: Famaritana ankapobeny
Ny klinikam-panjakana eto amin'ity firenena ity dia mizara ho karazana karazany manaraka:
Faritra - izay hita any amin'ireo tanàna afovoany isaky ny faritany, ny fatrany dia ambony indrindra (farafahakeliny 500 eo ho eo isaky ny), ny mpiasa dia manana ny manam-pahaizana ilaina rehetra.
Famantarana amin'ny ankapobeny - misy any amin'ny tanànan'ny faritany tsirairay ao amin'ny distrika lehibe indrindra. Amin'ny toeram-pitsaboana toy izany isaky ny 200 ka hatramin'ny 500.
Eo an-toerana - izay mipetraka amina toeram-ponenana misy dikany isam-paritra, mizara ho fandriana lehibe (90-150 fandriana), antonony (60-90 fandriana) ary kely (kely noho ny fandriana 60).
Ao amin'ny hopitaly eo an-toerana, toy ny fitsipika, izy ireo dia manome fanampiana voalohany ihany, avy eo, raha ilaina, dia manondro ny marary amin'ny toeram-pitsaboana manokana kokoa amin'ny fitaovana tsara indrindra - ankapobeny sy isam-paritra.
Amin'ireo mpizahatany mpitsabo, ny klinika ara-barotra any Thailand, izay miorina amin'ny renivohitra vahiny dia malaza. Ho an'ny dokotera rehetra any Thailand, ny fidirana amin'ny mpiasa amin'ireo iray amin'ireo toeram-pitsaboana ireo dia asa mahomby amin'ny asa, satria mampanantena izy fa fampitomboana ny fahazoan-dàlana ara-bola tsy mihoatra ny 1,5 heny noho ny karama ao amin'ny klinika monisipaly.
Ny fanafody nentim-paharazana ao Thailand koa dia tena malaza eo amin'ireo vahoaka Thailandey, ary eo amin'ireo mpizahatany mpitsabo. Ny fitsaboana Thai dia nanomboka tamin'ny andro taloha, raha ny fanasitranana matetika dia rahin'ny moanina bodista.
Tany am-piandohana Taonjato 20 Hadino ny fanafody nentim-paharazana ao amin'ity firenena ity, nanaiky ny quackery, fa tao amin'ny rihana faha-2. Taonjato 20 niova ny toe-javatra. Ny fifohazan'ny fanafody nentim-paharazana ao Thailand dia lasa ampahany amin'ny drafi-pampivoarana nasionaly.
Ny fanafody nentim-paharazana malaza indrindra eo an-toerana sy ny mpizahatany dia ny balsama ampiasaina amin'ny aretina ny tonony sy ny hozatra. Ary ny fiheverana akaiky koa dia voaloa amin'ny lamosina fitsaboana sy ny aromatherapy.
Ny toeram-pitsaboana tsy miankina malaza indrindra eto amin'ity firenena ity dia i Samiliu, Bumrungrad ary vondrona klinika Bangkok. Nalaza ireo mpizahatany amerikana sy Eoropeana nanomboka ny fiandohan'ny taonjato faha-21. Tsy midika akory izany fa ny tolotra ara-pitsaboana eto amin'ity firenena ity dia tena mora vidy amin'ny vahiny, saingy mbola mora noho ny any amin'ny firenena tandrefana (ohatra, matetika ny mponin'i Etazonia sy i Eropa andrefana dia tonga any Thailand mba hamonjy fandidiana plastika). Na izany aza, ho an'ny ankabeazan'ny mponina ao Thailandy, noho ny fivelom-piainana ambany, dia tsy hita ireo toeram-pitsaboana ireo.
Address: 33 Soi Sukhumvit 3, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailandy
Bumrungrad dia klinika manana fotodrafitrasa voalamina tsara, mahasarika ny marary betsaka indrindra amin'ny marary vahiny. Natsangana ity andrim-panjakana ity tamin'ny 1980 ary ankehitriny dia notitran'ireo vahiny maherin'ny 500 avy any amin'ny firenena 000 samihafa izy io. Iray amin'ireo lafin-javatra fahombiazana ny eo amin'ireo dokotera manodidina ny 190 eo ho eo miasa ao amin'ity toeram-pitsaboana ity, maherin'ny antsasa no voaofana any ivelany na voamarina araky ny fenitra iraisam-pirenena. Raha ny tokony ho izy dia dokotera 1 eo amin'ity andrim-panjakana ity no manana taratasy fanamarinana ara-pitsaboana amerikana.
adiresy: Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Khwang, Krung Thep Maha Nakhon 10310, Thailandy
Iray amin'ireo hopitaly tsy miankina lehibe indrindra any SEA. Ity tobim-pitsaboana ity ankehitriny dia manana sampana 15 manerana an'i Thailand ary departemanta 40 mahery any amin'ny hopitaly tanàna manerana ny firenena.
Ao birao ny birao foibe. Ny ankamaroan'ny dokotera ao amin'ny klinika miasa ao amin'ny sampana renivohitra dia mahay amin'ny fiteny iray na maromaro. Any Bangkok, ny firafitry ity toeram-pitsaboana ity dia manana foiben'ny Japoney iray izay mandinika ny toe-tsain'ny mponin'ity firenena manokana ity.
Address: 133 Klang Alley, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailandy
Address: 337 Somdet Phra Chao Tak Sin Rd, Khwaeng Samre, Khet Thon Buri, Krung Thep Maha Nakhon 10600, Thailandy
Address: 488 Thanon Srinagarindra, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
Tambajotra toeram-pitsaboana tsy miankina hatrany ity. Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny sampana, mifanaraka amin'ny fenitra tandrefana ny fitaovana. Indrindra manokana, toeram-pitsaboana 3 amin'ity tambajotra ity no nandalo ny accreditation JCI. Izy ireo dia manana ny fitaovana maoderina rehetra ampiasain'ny andrim-pitsaboana tsara indrindra any Etazonia, Canada ary Eoropa Andrefana.
Ny vidin'ny tolotra ara-pitsaboana dia ambany noho ny any Etazonia, Canada, ireo firenena EU. Ny 20% eo ho eo dia ny XNUMX%. Misaotra an'io dia manana ilay fahafahana ny marary, ankoatra ny fitsaboana, ho fanarenana sy fitsaharana tsara any Thailand.
Serivisy kalitao sy miovaova
Ny sampam-pitsaboana tsy miankina ao Thailand dia manomana fiofanana ho an'ireo mpiasa any ivelany ary mividy ny fitaovana fitsaboana tsara indrindra. Noho izany, saika tsy ambany izy ireo amin'ireo toeram-pitsaboana faran'izay tsara indrindra any Eoropa Andrefana. Ankehitriny, toeram-pitsaboana lehibe 30 mahery sy birao manokana nify tsy miankina, ary koa andrim-panjakana izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitsaboana hafa, mampiantrano vahiny.
Fivoarana fotodrafitrasa fialam-boly
Thailand dia mpitarika amin'ny faritra Azia Atsimo Atsinanana amin'ny fizahan-tany. Torapasika faran'izay tsara, ny natiora tsara tarehy ary tsangambato manan-tantara maro misokatra ho an'ny rehetra miampita ny sisin-taniny. Ny mponina dia manavaka amin'ny fanehoam-pitiavana sy ny fandraisana olona, ​​ary ny kalitaon'ny serivisy dia manome fahafaham-po ireo mpandeha faran'izay mangataka indrindra. Izany rehetra izany dia manafaingana ny dingana fanasitranana.
Azonao atao ny mahita ny manome ny fikarakarana vonjy taitra voalohany lavitra ny fonenana (aorian'izay, ary mety ho izany) eto.
Raha nitranga izany, dia narary ianao tany Thailand, ary raha tsy nanjavona fotsiny ny fiantohana ara-pitsaboana, ary tsy dia lafo loatra ny fanampiana ara-pitsaboana, dia:
Voalohany dia mila mahita ianao hoe aiza no misy ny hopitaly akaiky anao (ny Internet, na ireo eto an-toerana no hanampy anao amin'izany). Ity ambany ity ny adiresin'ny hopitaly toy izany any amin'ny tanànan'ny mpizahatany. ny hopitam-panjakana izany izay afaka manome anao fitsaboana ara-pahasalamana kalitao avo folo heny ambany noho ny any amin'ny klinika Thai tsy miankina. (Marina, araka izany, ny fanompoana ao amin'izy ireo dia tsotra kokoa)
Saika ny hopitaly fanjakana dia manana departemanta manokana hanampiana ireo vahiny. Matetika no antsoina hoe "Ho an'ny vahiny»
Raha tsy misy ny departemanta toy izany dia mifandraisa amin'ny rejistra. Tsy tranga fa hahafantatra anao any izy ireo (na amin'ny teny anglisy) aza, farafaharatsiny mba hahafantaran'izy ireo fa vahiny ianao ary tsy mandeha any amin'ny hopitaly fotsiny 🙂
Mety ho tonga tany amin'ny dokotera ianao. Fantatr'izy ireo tsara ny teny anglisy. Ary raha tsy mahalala azy ianao, dia mandika ny Google na mety phrasebooks, ary azo antoka ny tenin'ny tanana - izany rehetra izany dia anao.
Manampy ireo tranga ireo. Mihevitra izahay fa tsy manana zava-dehibe ianao, dia handray taratasim-panafody amin'ny fanafody ilaina (raha ilaina), ary jereo ilay mpanamory (Kashier). Manaraka azy io matetika dia misy varavarankely hahazoana fanafody fividianana fanafody novidina.
Amin'ny ankapobeny .. mahasalama! 🙂
Raha marary arizin'i Thailandy (fiantohana IS)
Antsoinay ny orinasa fiantohana ny mpiara-miasa aminao na ny biraon'ny orinasa. Ny telefaona dia tokony haseho amin'ny Politika. Ary manan-jo hangataka anao hiverina indray ianao (tsy mahomby ny manangom-bola)
Vonona ny hanome ny vaovao ilainao amin'ny telefaona. Toy ny: laharam-piantohana, programa fiantohana, antsipirihany pasipaoro, laharana finday. Hanontaniana anao ihany koa ny zava-nitranga. Inona ireo soritr'aretina sy izay zava-nisy teo aloha.
Aorian'ny "voarindra" ny fangatahanao dia mila miandry elaela ianao. Matetika ao anatin'ny adiny iray. Rehefa miverina miantso ianao ary raha ekena ny fiantohana ny raharaha, dia halefa any amin'ny hopitaly tsara karama eto amin'ny manodidina ianao. (Ny haavon'ny (stardom) amin'ny hopitaly dia miankina amin'ny fiantohana anao).
Nankany amin'ny hopitaly. aza hadino ny pasipaoronao sy ny politikam-piantohana. Ary ilaina ny manolotra azy amin'ny rejisitra.
Handalo ny fanadinana ilaina ianao.
Raha tsy misy zava-dehibe ianao ary tsy mila famerenana matetika na hopitaly iray, avy eo aorian'ny fampidirana dia hahazo invoice izay ilainao atao ny mametraka ny soniainao aorian'ny haben'ny vola.
Aorian'izany dia mahazo ny fanafody ianao ary ianao afaka.
Ny fiantohana dia mety misy amin'ny fandrindrana ny aretina isan-karazany, ny ratra ary ny toe-javatra nisy azy. (afaka mahita bebe kokoa momba ny fiantohana eto) Avereno eto ny lisitray izay matetika tsy tranga fiantohana.
Ireo naratra rehefa misy mamo.
Raha ny resaka mitondra fiara tsy misy fahazoan-dàlana na ny fiara mety, ny sokajy zon'ny zo.
Raha ny ratra dia narahina fanitsakitsahana lalàna (nilomano teny amoron-dranomasina tamin'ny toerana voarara tsy hilomano na efa lany daty ny visa, sns).
Ny fialam-boly faran'izay tsy rakotra amin'ny fiantohana anao.
Aretina azo avy amin'ny firaisana.
Famonoana ny aretina mitaiza (raha tsy manarona azy ireo ny fiantohana).
The Island Samui: Hopitaly Nathon (Hopitaly Governemanta Samui)
adiresy: 61 Moo 1, Nathon, Koh Samui, 84140
telefaonina: +66 (0) 77 421 230 / +66 (0) 77 421 232
Hua Hin: Hua hin hospitalital
adiresy: 30/2 Lalana Petchakasem eo anelanelan'i Soi 10 sy Soi 12
telefaonina: + 66 (0) 32 523 000
Phuket: Hopitaly Vachira phuket
adiresy: 353 Lalana Yaowarat, Tanànan'i Phuket
Tel: +66 (0) 76 361 234.
maika fanamby: 1669
Pattaya: Hopitaly Pattaya banglamung
adiresy: 669 Moo 5, Naklua, Chonburi
Tel: +66 (0) 38 429 244-5, +66 (0) 427 580
Krabi Town: Hopitaly Krabi
Telefaonina: +66 (0) 7561 1212
Hopitaly kristiana ao Bangkok
124 Si Lom, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500. telefaonina: +66 (0) 2 625 9000.
Hopitaly Saint Louis
27 South Sathorn Rd., Yannawa Sathorn Bangkok 10120 Thailand. telefaonina: +66 (0) -2838-5555.
Dikan-mahadomelina any amin'ny Kingkeow: 81-83 Road Sainumyen, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand Telephone: + (66 76) 296-125
RJ Pharmacy Pharmacy Address: 143-1 Rat-U-Thit 200 Pee Road, Patong beach, Kathu, Phuket 83150, Thailand Telepon: + (66 76) 341-238
Samakkee Pharmacy Address: 5 Phuket Road, Muang, Phuket 83000, Thailand Telefon: + (66 76) 211-472
Santi Address Pharmacy Pharmacy: 50 Rasada Road, Muang, Phuket 83000, Thailand Telefon: + (66 76) 211-531
Adiresy amin'ny pharmacy Villa: 272/5 Yaowarat Road, Muang, Phuket 83000, Thailand Telefon: + (66 76) 254-242
Tandremo raha te hahalala bebe kokoa ny zava-mahatalanjona mahafinaritra ny tontolontsika 🙂
Hopitaly governemanta any Thailand
telefaonina: +66 (0) 2 625 9000.
telefaonina: +66 (0) -2838-5555.
Misaotra! Momba ny fifandraisana amin'ny fivarotam-panafody ao Patong dia tena ara-potoana!